အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို - AlorAir
အဘယ်ကြောင့်ငါတစ် Dehumidifier လိုအပ်သလား?
နည်းပညာတိုးတက်လာရှေ့ဆက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွန်း, ဒါပေမယ့်လည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာပေးသာ။ ဤသည်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် dehumidifier လေထု၏ dehumidification နှင့်အတူလူကူညီရန်အဖြစ်အနာဂတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်များလျှော့ချနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဥပမာ, ပိုလျှံအစိုဓာတ်ကိုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အဆောက်အဦး၏အစိတ်အပိုင်းများမှအကုန်အကျပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
►အဘယ်မှာရှိပိုလျှံစို မှစ. လာကြသလား
လေထုအပူချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး, လေဟာအခိုးအငွေ့ပြည်နယ်အတွင်းရှိရေလူတယောက်ငွေပမာဏကိုကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။ လေအေးတဲ့အခါ, ရေကိုကိုင်ထားရန်၎င်း၏စွမ်းရည်အညီလျော့နည်းစေပါသည်။ ဤသည်လေ, အအေးမျက်နှာပြင်မှပိုလျှံအစိုဓာတ်ကိုဖြန့်ချိကျွန်တော်နှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ကြ၏ damp နှင့်ငွေ့ရည်ဖွဲ့ဖန်တီးသောအရာကိုဆိုလိုသည်။
ပိုလျှံစိုများအတွက် Dehumidifiers Choose အဘယ်ကြောင့်►?
သစ်သားအဆောက်အဦများမှိုနှင့်ပုပ်မှဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှမှိုနဲ့ပုပ်ထိုကဲ့သို့သောအတိုင်ကြမ်းပြင်နှင့်မညီမညာဖြစ်နေသောတံခါးကိုဘောင်အဖြစ်ကိစ္စများ, ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
သစ်သားအစိတ်အပိုင်းအဘို့ပြင်ဆင်၏ 15% ပုပ်များနှင့်မှိုကြောင့်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။ ဤသည်မီးဖြင့်ပျက်စီးဘာထက်ပိုသောအရာတို့ကိုဖကျြဆီးခံရကျွန်းသစ်၏အကြောင်းကို 20 ဘီလီယံပေစေပါတယ်။
ပြင်ပနံရံများအလွယ်တကူသူတို့ရဲ့မျက်နှာပြင်များပေါ်မှာအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အပူချိန် ပို. ပင်လျော့နည်းစေသည့်အခါအပိုဆောင်းရေတစ်ထိခိုက်သံသရာမှဦးဆောင်စုပ်ယူသည်။
Dehumidifier ပတ်ဝန်းကျင်ကနေအလွန်အကျွံအစိုဓာတ်ကို extract နှင့်သင့်လျော်သောစိုထိုင်းဆအဆင့်မှာပစ္စည်းများကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးပါမည်။ ဤသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်လျှော့ချခြင်းနှင့်နိမ့်ဆုံးမှာမှိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်။
သတ္တုချေးမကြာခဏဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုလျှံစိုထိုင်းဆများတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကလေထဲကသိပ်အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူလျှင်အိမ်ထောင်စုလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့်လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်ပတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ စားနပ်ရိက္ခာ, ဆေးဝါး, စာအုပ်တွေနဲ့အဝတ်အစားတွေကိုလည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှအားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် damp ထံမှမှိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Dehumidifier သင့်ရဲ့သိုလှောင်မှုပြဿနာတွေအားလုံးကိုပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ပေးနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုထိရောက်မြန်ဆန်သရုပ်ဆောင် AlorAir dehumidifiers အသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုစနစ်တကျဂရုစိုက်ဖြစ်ကြောင်းသေချာ။
damp ပတ်ဝန်းကျင်မကြာခဏတစ်ခုတိုးချဲ့ကာလအတွက် undetected သင့်အိမ်တှငျနထေိုငျ, ထိုကဲ့သို့သောခွတှစေား, ပုရွက်ဆိတ်တွေနှင့်ပိုးဟပ်အဖြစ်ပိုးမွှားမှအလွန်အမင်းဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားပိုးမွှားပေးရတာတွေလုပ်နေရပါတယ်သင့်အိမ်နှင့်ကျန်းမာရေးကိုကျယ်ပြန့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
Dehumidifier အလွယ်တကူသင့်ရဲ့လူနေမှုနှင့်အလုပ်အာကာသများအတွက်အဆင်ပြေစိုထိုင်းဆအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ ခြောက်သွေ့အဆင်ပြေလေထုပျံ့နှံ့နေတဲ့အသုံးပြုပုံသငျသညျပိုးမွှားကျခြင်းလျော့ခြင်းနှင့်လေထုအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
60% သို့မဟုတ်မြင့်မား၏မိုးလုံလေလုံဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆအဆင့်ဆင့်ကိုအလွန်သစ်သား, ဖုန်, ကတ်ထူပြားများနှင့်စက္ကူပေါ်မှာရှင်သန်ရာ, မှို, အနာများနှင့်မှို၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
မှိုန့်အဖြစ်ကလေထဲသို့အထူးဖော်စပ်ထားသန်းပေါင်းများစွာထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါကအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့အပြင်, အောက်နှင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်အနံ့စေပါတယ်။
တစ်ဦးက dehumidifier ထိရောက်စွာသည်မိုးလုံလေလုံစိုထိုင်းဆလျော့သင့်ရဲ့လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုပြီးအဆင်ပြေစေပါနှင့်လေးနက်သောရောဂါများအခွင့်အလမ်းကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
AlorAir dehumidifiers, လေတစ်ပန်း, လေ scrubbers နှင့်ပိုပြီးမှတဆင့်အဆင့်မြင့် IAQ နှင့် dehumidification ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုစီးရီးပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းသစ်ထုတ်ကုန်စက်မှုဇုန်ကနေလူနေအိမ်အထိအများအပြားပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကိုထုတ်ကုန်များတွင်တီထွင်ဆန်းသစ်ရပ်တန့်ဘယ်တော့မှရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့်မြင့် coil ►မြင့်မားရဲ Create
AlorAir dehumidifiers အပေါ်ကွိုင်နေတဲ့သမားရိုးကျ dehumidifier ၏ကွိုင်ထက်ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်အဆိုပါကွိုင်နှင့်တောင်ဒီဇိုင်းကိုစျေးနှုန်းချိုသာ, အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ် dehumidifiers တွင်တွေ့မရနိုင်သည်ကိုမူထူးခြားတဲ့ features တွေပါဝင်သည်။ ကွီးကွပျမှူးကွိုင်နှင့် heat exchanger သမားရိုးကျ dehumidifier အဖြစ်ကီလိုဝပ်နှုန်း 2-3 ကြိမ်လောက်အစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ AlorAir ရဲ့မြင့်မားတဲ့အကျိုးရှိစွာ dehumidifier စွမ်းအင်စရိတ်နှင့်ငါးနှစ်တွင်န့်အသတ်အာမခံနှင့်အတူပါလိမ့်မယ်ပုံမှန်အားနောက်ဆုံး 10+ နှစ်များတွင်တစ်နှစ်လျှင် $ 250 မှတက်ကယ်တင်တော်မူ၏။
ကွိုင်အပေါ် Epoxy Powder Coating ►
Freon ယိုစိမ့်နေတဲ့ dehumidifier များအတွက်ဆိုးဝါးအပြစ်အနာအဆာကိုရှောင်ရှားရန်, AlorAir epoxy coated ကွိုင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဤသည်ဆန်းသစ်သောအင်္ဂါရပ်တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနှင့်ကွိုင်ရဲ့အပူကိုလွှဲပြောင်းထိန်းသိမ်းအားဖြင့်ကွိုင်၏ဘဝအသက်တာကိုတိုးချဲ့။ ထို့အပွငျမွငျ့မားထိရောက်မှု rotary တွန်းနိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှကုန်ကျစရိတ်မှာအများဆုံးထိရောက်မှုသေချာ။
►အကြီးစား Duty ငွေ့ရည်ဖွဲ့ညှစ်ထုတ်လိုက်
မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောအပူ, ထောက်လှမ်းပျက်ကွက်နှင့်သံချေးအဖြစ်အလေးအနက်ကိစ္စများရှိညှစ်ထုတ်လိုက်။ ကံကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာများပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောသောစုပ်စက်ကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ 20 '' ရုတ်သိမ်းအကွာအဝေးနှင့်တကွ, ငွေ့ရည်ဖွဲ့စုပ်စက်ကိုသင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဖို့လွတ်လပ်မှုကိုပေးသည်။
AlorAir ရဲ့ငွေ့ရည်ဖွဲ့စုပ်စက်ပေါ်မှာရှိသမျှကြိုးတွေအမြန် Connect ပလပ်ရှိသည်။ ဤသည် installation နဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အလွယ်ကူစေသည်။
ပြည်တွင်းအစိတ်အပိုင်းများမှလျင်မြန်စွာ Access ကို►
အားလုံး AlorAir dehumidifiers ပြည်တွင်းရေးအစိတ်အပိုင်းများရန်လွယ်ကူ access ကိုပေးသညျ။ အဆိုပါ Sentinel စီးရီး access ကိုပြားတပ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်မုန်တိုင်းစီးရီးတစ်ခု clamshell အဖုံးရှိတယ်။ ထို့အပြင်စုပ်စက်အမြန် Connect ကြိုးတွေရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူထိန်းချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ကိုရယူသုံးခြင်းမရှိဘဲဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။
Remote Control ကို Humidistat ►
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝေးလံခေါင်သီ humidistat AlorAir ယင်းယူနစ်အခြားအခန်းတစ်ခန်းသို့ ducted ပါလိမ့်မည်သည့်အခါစံပြရွေးချယ်မှု, dehumidifiers စေသည်။ အဆိုပါ humidistat ကိုလည်းပြွန်စနစ်အားချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာတပ်ဆင်အချိန်ကိုလျှော့ချထားတဲ့ optional ကိုပြွန်တပ်ဆင်ထားအနားကွပ်, ပါရှိပါတယ်။
Bypass လုပ်ရ Air ကိုဒီဇိုင်းနှင့်အတူ►အာရုံခံ
အားလုံး AlorAir dehumidifiers တိုတောင်းစက်ဘီးစီးခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးရာ Bypass လုပ်ရ Air ကိုဒီဇိုင်းနှင့်အတူတစ်စိုထိုင်းဆအာရုံခံကိရိယာများပါဝင်သည်။ sensors အလွယ်တကူသို့မဟုတ်ပိတ်ပါဝါကိုမှမှားအချက်ပြမှုများကိုလက်ခံရရှိမှသူတို့ကိုကျရောက်နေတဲ့အောင်ပြည်တွင်းရေးအပူနှင့်စိုထိုင်းဆကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ အလှည့်မှာတော့ဒီတွန်း၏သက်တမ်း shortens နှင့်ရေခဲသေတ္တာစနစ်ကမတည်မငြိမ်စေသည်။ ဤပြဿနာကိုတိုက်ဖျက်ရန်ရန်, Bypass လုပ်ရ Air ကိုဒီဇိုင်းအဆိုပါအာရုံခံကိရိယာပြည်တွင်းရေးအပူနှင့်စိုထိုင်းဆကနေလုံးဝ insulator တွင်လည်းဖြစ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဓိကဘုတ်အဖွဲ့သိသိသာသာသင့်ရဲ့ dehumidifier ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ထိုကြောင့်, ရှိသမျှ AlorAir ဆားကစ်ဘုတ်ကာကွယ်မှုများအတွက် coated နေကြသည်။ အဆိုပါဘုတ်အဖွဲ့တမ်အထောက်အထားနှင့်သံလိုက်မှခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အဆိုပါအစိတ်အပိုင်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီဘုတ်အဖွဲ့စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်ပြီး 100% ရှိပါတယ်။
► Ductable ယူနစ်သင့်အသက်တာပိုလွယ်ကို
dehumidifiers ၏ AlorAir မိသားစု applications များ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံတို့အတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါပြွန်ပစ္စည်းများထိုကဲ့သို့သောစက်မှုအခန်းတစ်ခန်းအဖြစ်ယူနစ်တစ်ဦးဝေးလံသောနေရာတွင်ထားရှိခံရဖို့ခွင့်ပြုသဖြင့်, အိမ်ရှိအခြားအခန်းတစ်ခန်းထဲကနေထိန်းချုပ်။ အချို့ applications များအတွက်တစ်ဦးဝေးလံခေါင်သီ humidistat လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။
ဘယ်လို AlorAir ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်သင်ကငွေပါသလား
သင့်အိမ်ရှိစိုထိုင်းဆအဆင့်ဆင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းသင့်အိမ်, ကျန်းမာရေးနှင့်မိသားစုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး AlorAir dehumidifier သင့်ရဲ့စိုထိုင်းဆပြဿနာများတစ်ခုတတ်နိုင်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ သာလွန်မိုးလုံလေလုံလေထုအရည်အသွေးကိုအတွက်ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစွမ်းအင်ချွေတာတဲ့နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။
AlorAir ရဲ့ dehumidifiers ၏မြင့်ရဲသငျသညျသမားရိုးကျ dehumidifiers နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်အထိ $ 250 ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။ တစ်ဦး AlorAir dehumidifier ပုံမှန်အား 10+ နှစ်ပေါင်းကြာရှည်နှင့်ငါးနှစ်တွင်န့်အသတ်အာမခံနှင့်တကွကြွလာလိမ့်မယ်။ ဒါကလေအေးပေးစက်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချထံမှမြှုတ်တဲ့ projected ငွေစုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ 50% သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းတဲ့တသမတ်တည်းဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တတ်နိုင်ကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင့် HVAC တစ်ဦးအဆင်ပြေအပူချိန်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ခဲယဉ်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်မဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦး AlorAir dehumidifier ၌သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသာလည်းပိုအဆင်ပြေကျန်းမာလူနေမှုအာကာသဖန်တီးပါလိမ့်မယ်, စွမ်းအင်ချွေတာပေးပေမယ့်မည်မဟုတ်။
နယူး Uzit Re-dispatch
ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးအတှကျအ AlorAir ရဲ့ကို bundle devices များ:
အကောင်းဆုံးကိုဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေခြင်းရှုပ်ထွေးနှင့်အတွေ့အကြုံဝယ်လက်များအတွက်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်ပါတယ်။ AlorAir မှမျိုးစုံပြန်လည်ထူထောင်ရေးအထုပ်များတီထွင်ထားပါတယ်:
1. ရေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု Restore
3. ပြီးနောက်-ရေလွှမ်းမိုးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတာဝန်ခံချ Cut